Buntilan oo markii ugu horreysay saluugtay dowladda Farmaajo
Home » WARARKA MAANTA » Buntilan oo markii ugu horreysay saluugtay dowladda Farmaajo	Buntilan oo markii ugu horreysay saluugtay dowladda Farmaajo
20/03/2017	1,142 Views Maamulka Buntilan ayaa markii ugu horreysay waxa uu saluugay qaabka ay madaxda cusub ee dowladda Soomaaliya u wadaan howlaha u yaalla, waxaana uu maamulku ku taliyay in wax laga beddelo qaabkaas.
Madaxweyne-ku-xigeenka Buntilan Cabdixakiim Cabdllaahi Cameey oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in dowladda cusub ay heysato taageerada shacabka, isla markaana loo qabo rejo aad u weyn; balse madaxda dowladdu ay hadda u muuqdaan kuwo waqti badan ku luminaya isku-mashquulsanaan iyaga dhexdooda ah.
Mudane Cameey ayaa ka digay in la lumiyo kalsoonidii iyo taageeradii ballaarnayd ee ay shacabka Soomaaliyeed ku soo dhaweeyeen doorashadii madaxweynaha cusub iyo dhismaha dowladdiisa.
Maamulka Buntilan iyo maamullada kale ee dalka ka jira oo dowladihii hore ay mararka qaar is-khilaafi jireen ayaa tan iyo markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ahaayeen kuwo aamusan, oo dusha kala socda taageerada shacabka ay u muujiyeen madaxweynaha; hase ahaatee aamusnaantooda ayaa u eg mid sii dhammaanaysa, maadama ay haddda soo muuqanayaan dhaliillo aan laga aamusi karin.
Previous: Ciidamada amniga oo ka farxiyay dadka ku nool Yaaqshiid
Next: Mucaaradkii Xassan Sheekh oo ka shallaayay taageeridda Farmaajo (Xog culus)